China Custom CNC machining nkenke Machinery Parts factory na ndị na -eweta ya BASILE
Nhazi nkenke nwere ike ibute usoro nrụpụta ọ bụla na ọkwa ọzọ. Ọ nwere ike rụọ ọrụ ebube maka arụmọrụ arụmọrụ, belata oge ntụgharị, ma belata ọnụ ahịa mmepụta ihe. Kedu onye maara nke a karịa otu n'ime ndị nrụpụta akụrụngwa CNC na -atụgharị na igwe na China nwere ahụmịhe afọ 15 n'okpuru eriri ya? BMT anọwo na -enye akụkụ pụrụ iche maka ụlọ ọrụ kemgbe ahụ.
A na-akwado ike nrụpụta CNC anyị site na akụrụngwa ọgbara ọhụrụ, gụnyere igwe 3-axis na 4-axis, lathes nkịtị, igwe ịkwọ bandeeji, ngwaọrụ igwe ihe, ndị na-ese ihe laser, igwe mgbatị radial, WEDM, wdg. nke ahụ pụtara gị? BMT nwere ihe ọ bụla ọ na -ewe iji nye gị ihe ọ bụla nkenke ị chọrọ - site na -egwe ọka na ịtụgharị ihe ruo n'ichepụta akpaka na igwe mpempe akwụkwọ na stampụ.
Kedu ihe kpatara ịhọrọ akụkụ igwe CNC anyị?
Na anyị, ị nwere ike irite uru na ihe karịrị naanị ụdị ihe dị iche iche. Dị ka otu n'ime ndị na -eweta akụkụ CNC kacha elu, anyị nọ n'ọnọdụ inye gị ọkachamara metụtara:
Enwere ike ịhazi ngwaahịa anyị ka ọ daba na ROHS, REACH, ASTM, ISO na ụkpụrụ mba ụwa ndị ọzọ.
Na -adịgide adịgide
Akụkụ CNC anyị niile na -aga ọtụtụ usoro njikwa iji hụ na ha nwere ike iguzogide ojiji oge niile. Mụ na gị, ị nwere ike irite uru n'ịrụzi igwe mgbe ị na -azọpụta ọtụtụ.
Ị chọrọ enyemaka na ịwụnye ụfọdụ components ma ọ bụ chọọ ịtụ akụkụ mebere omenala? Kpọtụrụ anyị mgbe ọ dị gị mma.
Agbanyeghị na ụlọ ọrụ mmepụta ihe anyị dabere na Dalian, China, anyị na -ebunye akụkụ igwe CNC na mpụga China. Mkpuchi nke BMT gafere karịa ahịa mpaghara, anyị emeela onwe anyị aha nke ọma na USA, Germany, Italy, Saudi Arabic na Russia. Onye isi nrụpụta ụwa tụkwasịrị anyị obi ka anyị na -egbo mkpa ha mgbe niile.
Ọ bụrụ na ị na -eme otu n'ime ụlọ ọrụ ndị a ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọ bụla ọzọ dabere na teknụzụ CNC, jide n'aka na BMT nwere ike inyere gị aka ibuli mmepụta gị elu. Anyị na -eji ọtụtụ ihe arụ ọrụ, gụnyere igwe anaghị agba nchara, aluminom, titanium, ọla, ọla, wdg. Ka anyị mara ihe usoro nrụpụta gị chọrọ, anyị ga -enyekwa gị nke ahụ maka ọnụ ahịa dị mma.
Maka ịdị mma gị, ị nwere ike ịchọta akụkụ CNC arụpụtara nke ukwuu na ịpị aka ole na ole site na enyemaka nke ụlọ nchọta na webụsaịtị anyị. Nwere onwe gị izitere anyị ozi ịntanetị ma ọ bụ kpọọ anyị n'oge ọ bụla. BMT — N'ọrụ Gị!
Nke gara aga: Ọrụ Akụkụ Ngwa CNC nke emere emere
Osote: Ọkachamara OEM CNC Machined Parts
Ọrụ igwe CNC
Akụkụ ịkpụzi CNC nkenke
Akụkụ nkenke dị elu
Nkenke cnc Parts
Igwe anaghị agba nchara na CNC machining
Ahaziri CNC machining
High nkenke Plastic CNC machining
Akụkụ nkenke CNC Machining Parts
Akụkụ Ngwa CNC, Omenala igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ, High-End mpempe akwụkwọ Metal Parts ngwaahia, Akara akpaghị aka, Igbe galvanized, Igwe eji arụ ọrụ titanium,